26일 한국 국립대전현충원에서 열린 천안함 용사 4주기 추모식에 참석한 장병들이 거수경례를 하고 있다.
Xiisado ayaa weli ka aloosan gacanka Kuuriya, iyadoo labada dhinac ay is weydaarsanayaan eedeymo. Koonfuur Kuuriya ayaa qabsatey doon kaluumeysi oo ay leedahay Kuuriyada Waqooyi oo ku soo habowdey biyaha Koonfuurta Kuuriya.
Milateriga Koonfuur Kuuriya ayaa sheegay in doontu ay ilaa laba kilometer soo gashey xadka biyaha koonfuurta, isla markaana ay diidday digniin loo jeediyey oo ahaa onay dib ugu laabato halka ay ka timid ee dhanka waqooyi.
Saddex ka mid ah shaqaalihii saarnaa doonta ayaa xabsi la dhigay, iyadoo saraakiisha magaalada Seoul ay wadaan baaritaano. Saraakiisha ayaa intaa ku darey in ragga la soo qabtey aanay u muuqan kuwo doonayey inay waddankooda ka soo baxsadaan, ayna doonayaan inay dib u laabtaan.
Dhanka kale Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar afka ah ku qaaddey Madaxweynaha Koonfuurta Kuuriya Park Geun-hye, iyagoo ugu yeerey inay tahay dabadhilif daacad u ah Mareykanka, isla markaana barbardhigay haweeney ama ku tilmaamey inay tahay haweeney aan ilbax ahayn oo si aan ka fiirsasho lahayn isaga hadasha.
Afhayeen u hadley Wasaaradda Arrimaha Midaynta Kim Eui-do ayaa sheegay in weerarka loo geystey madaxweynaha ee lagu soo bandhigey wakaalada wararka ee Kuuriyada Waqooyi uu ka hor imanayo heshiiskii dhowaan ay wada gaareen Seoul iyo Pyongyang oo ahaa in laga fogaado hadalada aan wanaagsaneyn.